FMI | Your blueprint for investing in Myanmar | Annual Report 2018-20…
FMI | Your blueprint for investing in Myanmar | Annual Report 2018-2019
The AI Rush by Jean-Baptiste Dumont 3192240 views
AI and Machine Learning Demystified... by Carol Smith 4388796 views
10 facts about jobs in the future by Pew Research Cent... 1413148 views
Harry Surden - Artificial Intellige... by Harry Surden 1064805 views
Inside Google's Numbers in 2017 by Rand Fishkin 1626166 views
Pinot: Realtime Distributed OLAP da... by Kishore Gopalakri... 847323 views
FMI is proud to present its Annual Report for FY2019. During the past 27 years, FMI has given investors unparalleled access to Myanmar’s Financial Services, Real Estate, Healthcare and Tourism industries. This year’s Annual Report celebrates our legacy as Myanmar's leading blue-chip company by offeringablueprint for investment in the country.
1. A N N U A L R E P O R T20 1 8 -20 19investing in Myanmar Y o u rbl uep r i n tfo r
2. YOUR BLUEPRINT FOR INVESTING IN MYANMAR FMI is proud to present its Annual Report for FY2019. During the past 27 years, FMI has given investors unparalleled access to Myanmar’s Financial Services, Real Estate, Healthcare and Tourism industries. This year’s Annual Report celebrates our legacy as Myanmar's leading blue-chip company by offeringablueprint for investment in the country.
3. GOVERNANCE & SUSTAINABILITY Corporate Governance Report 54 Sustainability Report	66 FINANCIAL REPORT Report of the Directors	81 Statement of the Directors	83 Independent Auditor’s Report 84 Notes to Consolidated Financial Statements	92 PERFORMANCE REVIEW FY2019 Group's Financial Highlights	26 Operational & Financial Review	27 FMI’s Key Businesses	30 Financial Services	32 Healthcare	36 Real Estate	40 Tourism	44 Strategic Investments	50 CORPORATE OVERVIEW Corporate Profile	4 Our Vision	4 Our Mission5Chairman’s Message6FY2019 Key Achievements & Highlights 12 Board of Directors	14 Management Team	20 CONTENTS
4. BUILD A BETTER MYANMAR FOR ITS PEOPLE2| FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD.
5. I always take pride in beingapart of the Yoma Group, which contributes towards bringing Myanmar and the financial sector forward, and continuously has its clients’ best interests in mind." At Pun Hlaing Siloam Hospitals, I'm privileged and proud to beapart of the Yoma Group which has an ethos to drive incremental steps in patient safety and quality that is consistent with international benchmarks and putting care back into healthcare in our country. Beingapart of the Yoma Group has beenaprivilege for me. It is tremendously satisfying to be able to buildacareer based upon the greater good of transforming Myanmar for the better. I am so proud to beapart of Memories Group under the YOMA Group, having the chance not only to march towards its responsible visions and its ethical business model but also to build upabetter Myanmar. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတိုးတက်မှုမှာ အဓိကထားဆောင်ရွက်နေပြီး သုံးစွဲသူပြည်သူများ အကောင်းဆုံး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ အမြဲစိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ ရိုးမအုပ်စု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ပါဝင်ခွင့်ရသည့်အ တွက် များစွာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ရိုးမအုပ်စုရဲ့ မဏ္ဍိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံတကာအသိ အမှတ်ပြု စံနှုန်းစံထားများရှိတဲ့ လူနာများဘေးကင်းလုံခြုံစေရေး အရည်အသွေးများ တိုးတက်မြင့်မားလာအောင် တစ်ဆင့်ခြင်းကြိုးစားနေမှုမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည့်အတွက် ကျွန်မအနေနဲ့ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ရိုးမကုမ္ပဏီအုပ်စုမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိခြင်းဟာ ကျွန်မအတွက် အထူးအခွင့်အရေးတစ်ရပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မြန် မာပြည်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြောင်းလဲမှုတည်ဆောက်ရန်ဟူသော ရည်မှန်းချက်တွင် အခြေခံ သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ လုပ်ကုိုင်ခွင့်ရရှိရသည့်အတွက် စိတ်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ရိုးမကုမ္ပဏီအုပ်စုဝင် Memories Group က လူမှုအဖွဲ့အစည်းအပေါ် တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက်များထားရှိပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ စီးပွားရေးအလေ့အထများရှိသည့်အပြင် မြန်မာနုိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကဏ္ဍမှာ ကျွန်တော် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက် များစွာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ZARNI TUN DEPUTY HEAD OF CORPORATE SALES YOMA BANK ZAW WIN SANDY DIRECTOR OF HOSPITAL OPERATIONS PUN HLAING SILOAM HOSPITALS MIKI ZAW DEPUTY HEAD OF MARKETING YOMA LAND TUN THURA GENERAL MANAGER OF BALLOONS OVER BAGAN & INLE MEMORIES GROUP ANNUAL REPORT 2018-2019 | 3
6.4| FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD. CORPORATE OVERVIEW OUR VISION INVESTOR SATISFACTION We create sustainable investment opportunities by leading with integrity and robust business practices. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ကျေနပ်နှစ်သက်မှု ကျွန်ုပ်တို့သည် သမာဓိရှိခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ပြည့်စုံမျှတသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ရေ ရှည်တည့်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်း များကို ဖန်တီးပေးလျက်ရှိပါသည်။ CORPORATE PROFILE First Myanmar Investment Public Co., Ltd. (“FMI”, the “Company” and collectively with its subsidiaries, the “Group”) is one of Myanmar’s largest public companies with more than 8,600 shareholders and hasatrack record of profitability over the past 27 years. In March 2016, FMI became the first company to list on the Yangon Stock Exchange (“YSX”). FMI’s strength lies in its strategic diversification, professional management, corporate governance and transparency. FMI’s Board of Directors (the “Board” or the “Directors”) promotes good corporate governance and hasastrong independence element to protect the interests of its stakeholders. FMI is affiliated with Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited (“SPA”), Yoma Strategic Holdings Ltd. (“Yoma Strategic”),acompany listed on the Mainboard of the Singapore Exchange Securities Trading Limited (the “SGX-ST”), and Memories Group Limited (“Memories Group”),acompany listed on the Catalist board of the SGX-ST. FMI, SPA, Yoma Strategic and Memories Group, together with their respective subsidiaries, are collectively referred to as the “Yoma Group”. First Myanmar Investment အများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီလီမိတက် (“FMI”) (“ကုမ္ပဏီ” နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲများစုပေါင်း၍ “ကုမ္ပဏီ အုပ်စု”) သည် အစုရှယ်ယာရှင်ပေါင်း (၈,၆ဝဝ) ကျော်ရှိပြီး စတင်တည်ထောင် သည့် အချိန်မှစ၍ (၂၇)နှစ်တာကာလတစ်လျှောက် အမြတ်အစွန်းစဉ်ဆက်မပြတ် ရရှိခဲ့ခြင်းတို့ဖြင့် မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခု ရေးထိုးထားနိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးအများပိုင် ကုမ္ပဏီများအနက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ FMI သည် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၌ စာရင်းဝင်သော ပထမဆုံးကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ FMI ၏ အားသာချက်များမှာ မဟာဗျူဟာမြောက်သောရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ၊ ကျွမ်းကျင်သောစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စည်း ကမ်းရှိသော ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ FMI ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ကောင်းမွန်သော စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ကုမ္ပဏီနှင့်သက် ဆိုင်သူအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုကာ ကွယ်သည့်အခြေခံဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် Serge Pun & Associates (Myanmar) လီမိတက် (“SPA”) ၊ စင်္ကာပူ စတော့အိတ်ချိန်း (“SGX-ST”) ၏ Main Board တွင် စာရင်းတင်သွင်းထားသော Yoma Strategic Holdings လီမိတက် (“Yoma Strategic”) နှင့် Catalist Board တွင် စာရင်းသွင်းထားသော Memories Group လီမိတက် (“Memories Group”) တို့နှင့် မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။ FMI ၊ SPA ၊ Yoma Strategic ၊ Memories Group နှင့် ၎င်းတို့ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီအားလုံးကိုစုပေါင်း၍ “Yoma Group” ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲပါမည်။ A LOCAL COMPANY WITH AN INTERNATIONAL OUTLOOK CUSTOMER SATISFACTION We serve our customers by being their trusted partner to deliver the best products and services for their needs. EMPLOYEE SATISFACTION We invest in our people to build careers aroundashared culture of fairness, diversity, empowerment and recognition. သုံးစွဲသူပြည်သူများ၏ ကျေနပ်နှစ်သက်မှု ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်သူတို့၏ လိုအပ်ချက်များ အ တွက် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ကို ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ယုံကြည် စိတ်ချရသော မိတ်ဖက်အဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိပါ သည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျေနပ်နှစ်သက်မှု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ထမ်းထုအတွင်း တရားမျှတမှု၊ မတူကွဲပြားမှု၊ အခွင့်အာဏာပေးအပ်မှု၊ အသိအမှတ် ပြုမှု စသည့်အသိတရားများကို အခြေခံသည့် ယဉ် ကျေးမှုတစ်ရပ် ထွန်းကားပျံ့နှံ့စေရေးအတွက် ရင်း နှီးမြှုပ်နှံ တည်ဆောက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
7. MISSION INNOVATION INTEGRITY RESPECT TEAMWORK PROMISE VISION BuildaBetter Myanmar for its People Good Governance, Good Ethos, Good Practice. OURFOURC ORE VALUES OURFOUR CORE VALUES OUR FOUR C OREVALUES OUR FOUR C OREVALUES INVESTORS CUSTOMERS EMPLOYEES I c E "ပြည်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရန်" "ပြည်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရာတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဟာ ကုမ္ပဏီအုပ်စုအတွက် အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သလို ကျွန်တော်တို့ ရှေ့လျှောက်လုပ်ဆောင်သမျှ ကိစ္စတိုင်းတွင် လည်း တန်ဖိုးများကိုဖန်တီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြန်မာနိုင်ငံကို ကျွန်တော့အနေနှင့် အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရမည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံ၏မနက်ဖန်တိုင်းရှိ ရုပ်ဝတ္တုအရေအတွက်၊ အရည်အသွေး၊ စိတ်ဓာတ်ရေးရာနှင့် ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်း ဆိုင်ရာအပိုင်းများကို ယနေ့ထက် ပိုမိုသာလွန်အောင် ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ ထိုသို့ ခိုင်မြဲနက်နဲသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကျွန်တော်တို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပြည်သူ တို့၏ပူးပေါင်းမှုဖြင့် ပြည်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြန်မာနိုင်ငံကို ကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ တည်ဆောက်သွားမည်ဟု သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါတယ်။" OUR MISSION “BuildaBetter Myanmar for its People” "The “How” to “BuildaBetter Myanmar for its People” leads us to confront the biggest challenge facing the Group and to buildaroadmap to move forward and create value in everything we do. How isabetter Myanmar defined? In my own words, “better” must be compared in quantitative, qualitative, spiritual and material terms to that of today. Through passion and proficiencyalignedto thisdeepsenseofdetermination, the Group is committed to buildabetter Myanmar together with its people and for its people." U THEIM WAI @ SERGE PUN EXECUTIVE CHAIRMAN ANNUAL REPORT 2018-2019 | 5
8.6| FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD. Ourmissionis“ToBuildaBetterMyanmar for its People”. In order to achieve this goal, the collective effort of our entire workforce and their commitment to this mission is necessary. CHAIRMAN'S MESSAGE
9. ANNUAL REPORT 2018-2019 |7DEAR SHAREHOLDERS, It is with great pride and privilege that I update you on what has evidently been another year of achievement for FMI as we continue to build our businesses towards fulfilling our mission to ‘BuildaBetter Myanmar for its People’. Financially, the results of the Group for the financial year ended 31 March 2019 ("FY2019") sawahealthy revenue growth of 36% to MMK 279.7 billion from MMK 205.6 billion in the financial year ended 31 March 2018 ("FY2018"). As we continue to build our businesses around our core focus sectors, the emphasis on transformation through People - Investors, Customers and Employees - had acted asacatalyst to the commendable result of catering to the long- term needs of our stakeholders. FOCUSING ON THE FOREST There have beenanumber of positive developments for Myanmar during the past year and the country’s overall growth forecast is looking positive as the Myanmar Government continues to make progress in pro-business reforms as well as streamline regulatory processes. The wide-ranging reforms initiated since the elections in 2011 have continued under the current Government. The Government’s focus on economic development is alsoahighlight in the most recent strategic planning document, the “Myanmar Sustainable Development Plan (2018 – 2030)”, issued by the Ministry of Planning and Finance. In addition, the Asian Development Bank (the “ADB”) has predicted that Myanmar’s economic growth will reach 6.6% in 2019, and 6.8% in 2020.1 As the country opens up the retail and wholesale sectors and modernises corporate governance processes, we believe Myanmar will continue to see steady growth in the next few years. 1 https://www.adb.org/news/foreign-investment-policy- reforms-boost-myanmars-growth-2019-and-2020-adb The adoption of the new Myanmar Companies Law 2017 (the “MCL”), which came into effect on 1 August 2018, has also helped foreign investors who wish to invest in Myanmar as it clarifies procedures for setting up businesses. The formation of the Ministry of Investment and Foreign Economic Relations (“MIFER”) under the leadership of the Union Government has also provided much needed confidence to the business community as one of MIFER’s role is to improve communication and coordination between ministries and agencies. Initiatives such as the Central Bank of Myanmar’s move to allow foreign banks to lend to local businesses is expected to increase foreign direct investment and improve liquidity, thus strengthening Myanmar’s overall economic outlook. While there may be potential headwinds with regard to the deepening trade tensions between the United States and China, there remain opportunities that Myanmar may be able to explore in the light of China’s Belt and Road Initiative (“BRI”). I believe Myanmar hasalot to gain from the BRI. Substantial investment is needed to build Myanmar’s infrastructure, develop the economy, generate jobs and raise living standards for our people. Myanmar’s strategic location between China and the Indian Ocean makes the country an extremely important partner to China. If Myanmar is able to take advantage of such opportunities, this would be beneficial to both countries. Due to rising international trade tariffs on goods made in China, we also haveawindow of opportunity to attract large Chinese manufacturers to set up their operations in Myanmar. The players will bring with them investment and know-how, galvanising our manufacturing sector. Myanmar must also enforce strict rules to mitigate the risks of corporate misconduct and environmental damage which must be similarly applicable to both foreign and local companies.
10. 8 | FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD. AND NOW THE TREES With these significant economic developments,asurge in the size and affluence of Myanmar’s consumer class may be expected. FMI is working on building up its core businesses such that they are primarily consumer-focused. Financial services turned inastrong performance witha36.5% increase in total revenue to MMK 254.5 billion in FY2019 as compared to FY2018. Yoma Bank Limited ("Yoma Bank" or "the Bank") continues to look for innovative ways to improve financial inclusiveness in the country by accelerating digitisation of its SMART account offering. We believe in providing good customer services and the way to achieve this goal is to continue to strengthen the Bank’s systems and processes, as well as to simplify and standardise branch organisation. In April 2019, the Lippo Group’s interest in Pun Hlaing Siloam Hospitals (“PHSH”) was bought over by OUE Lippo Healthcare Limited (“OUELH”),acompany listed on the Catalist board of SGX-ST. We believe this translates well for PHSH as it aligns with OUELH’s vision of growing its presence in other high-growth Asian markets to becomeapan-Asia healthcare player. The revenue of PHSH improved by 32.6% to MMK 24.9 billion in FY2019. In the real estate sector, while we see the sector going throughaperiod of adjustment, there isasocial and economic shift currently underway in the country and we are seeing changes in lifestyle and the growing aspirations of the younger generation. Yoma Land constantly strives to keep up with the changes and developments in the real estate sector, and has expanded its real estate offerings in the past year. In early 2019, the City Loft project,anew division of modern affordable housing that targets the underserved middle-income market in Yangon, was launched. City Loft makes home ownership more accessible with its combination of affordable price points and favourable mortgage repayments of up to 25 years arranged with domestic banks, and allows the middle-income earners to become home owners. This isamajor milestone for us and for Myanmar’s real estate sector as well. FMI’s investment in the tourism sector through Memories Group continues to evolve, and is todayaleading experience- driven hotel and luxury travel adventures company in the country. The mission of Memories Group is “To be the first choice in creating warm and genuine memories of Myanmar and beyond.” Through giving travellers the opportunity to see the country and meet its people, Memories Group aims to cultivateabetter understanding of the complexities of Myanmar and give people the opportunity to contribute to its development. Inacountry as beautiful, diverse and culturally rich as Myanmar, tourism if properly managed, has the potential to play an extremely important role in the overall economic growth of the country. As such, FMI expects tourism to beacore focus of its businesses. OUR PEOPLE Our mission is “To BuildaBetter Myanmar for its People”. In order to achieve this goal, the collective effort of our entire workforce and their commitment to this mission is necessary. FMI has four core values – Integrity, Teamwork, Innovation and Respect, which our workforce strives to uphold. Asacompany, we are of the view that it is important to advocate gender equity in Myanmar’s business community. This is an important movement that has far reaching significance for our society at large. We areafounding member of the Business Coalition for Gender Equality (BCGE) and have received the certification for the international EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) certification in October 2018. EDGE certification offersatransparent and unbiased view of whetheracompany hasastrong gender balance, effective policies and practices, and inclusive culture. I am hopeful that with the combined efforts of the Government as well as the private sector to promote gender equality and inclusion in the workplace, we will seeathriving workforce where men and women have equal access to opportunities. GROWING FORWARD While we acknowledge what we have established and achieved this year, we will continue to pursue long-term strategies which are vital to ensure our success in various businesses across Myanmar. Although business success is our priority, we will not forget our duty to the country and our responsibility to takealeadership role in providing employment opportunities as well as shaping the corporate landscape. On behalf of the Board, I would like to thank our new and old shareholders, many of whom have believed in FMI since the beginning. Additionally, I would also like to express my appreciation for the commitment and contributions of our talented employees, who have helped shape FMI to beatruly responsible company that adheres to international standards. Your faith in the Company would enable us to extend greater success in many years to come. I believe that by working together and being as one, we will bringabetter Myanmar for its people. Yours Sincerely, U THEIM WAI @ SERGE PUN EXECUTIVE CHAIRMAN
11. ANNUAL REPORT 2018-2019 |9အစုရှယ်ယာရှင်များခင်ဗျား FMI သည် ပြည်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြန်မာနိုင်ငံတည်ဆောက် ရန်ဟူသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကိုဦးတည်၍ နှစ်တစ်နှစ်၏ ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်ကောင်းများ ရရှိခဲ့သည့်အတွက် ကျွန်တော်အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၁)ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီ အုပ်စု၏ဝင်ငွေသည် ကျပ် (၂၀၅.၆) ဘီလီယံ ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ကုန်ဆုံးသည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ် (၂၇၉.၇) ဘီလီယံအထိရှိခဲ့သဖြင့် ၃၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍများကို တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ သုံးစွဲသူပြည်သူများနှင့် ဝန်ထမ်း များအပေါ်အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းအ တွက် ကျွန်တော်တို့ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏ ရေရှည်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့် ဆည်းခြင်းများဖြင့် သက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးအပေါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်အတွင်း မြန်မာနုိုင်ငံတွင် ကောင်းမွန်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု များစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနုိုင်ငံအစိုးရမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူလျင်မြန်စေရန် လိုက်နာရမည့် လုပ်ထုံးစည်းမျဉ်းများအား ဖြေလျော့ပေးနေသဖြင့် နုိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အကောင်းဘက်သို့ ဦးတည်လျက်ရှိနေပါသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စ၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ “မြန်မာနိုင်ငံရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (၂၀၁၈ -၂၀၃၀)” အတွက် မကြာသေးခင်မှ စီမံရေးဆွဲခဲ့သည့် မဟာဗျူဟာမြောက် စာရွက်စာတမ်း ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အစိုးရမှ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအပေါ် အလေးထားဆောင် ရွက်နေသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။
12. 10 | FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD. ၁ https://www.adb.org/news/foreign-investment-policy-reforms-boost-myanmars-growth-2019-and-2020-adb ထိုအချက်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၆.၆ %၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် တွင် ၆.၈% အထိ စီးပွားရေးတိုးတက်နုိုင်မည်ဟု အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။၁ လက်လီလက်ကားကဏ္ဍတွင် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရောက်ရှိလာခြင်း၊ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုများကို ခေတ်နှင့်အညီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသောကြောင့် လာမည့်နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေမည်ဟု ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁)ရက်နေ့တွင် အကျိုးသက်ရောက်သည့် ၂၀၁၇ ကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအသစ်ကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုစတင်ရန် လိုအပ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သေချာစွာသိရှိလာခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်ဆံရေး ဝန်ကြီးဌာန (MIFER) တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွား ရေးအသိုက်အဝန်း၏ ယုံကြည်မှုမှာလည်း မြင့်မားလာခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် MIFER သည် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အေဂျင်စီများအကြား ဆက် ဆံရေးနှင့် ညှိနှိုင်းမှုများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ နုိုင်ငံခြားဘဏ်များက ဒေသခံစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများထံငွေချေးခွင့်ကို မြန်မာနုိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်မှ ခွင့်ပြုလိုက်သည့်အတွက် နုိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တုိုး မြင့်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ရပြီး ငွေကြေးစီးဆင်းမှု ပိုမိုလျင်မြန်လာကာ မြန်မာနုိုင်ငံ ၏ ယေဘုယျ စီးပွားရေးအခြေအနေလည်း အားကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အခြေအနေကို ခြုံငုံသုံးသပ်မည်ဆိုလျှင် အမေရိကန်နှင့် တရုတ် နိုင်ငံတို့ကြားရှိ ကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုများရှိသော်လည်း ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမစီမံ ကိန်း (BRI) ကြောင့် အခွင့်အရေးများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။ နုိုင်ငံအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရန်၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရန်၊ အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးနိုင်ရန်နှင့် ပြည်သူများ၏လူနေမှု အဆင့်အ တန်းကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာကို BRI စီမံကိန်းမှ ရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။ မြန်မာနုိုင်ငံသည် တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာအကြား မဟာဗျူဟာကျသောတည်နေရာတွင် ရှိနေသောကြောင့် တရုတ် နိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော မိတ်ဖက်နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်နေပါသည်။ မိမိတို့ နုိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာကျသောအနေအထား တစ်ပန်းသာမှုကိုအခြေခံ၍ နှစ်ဦးနှစ် ဘက်အကျိုးရှိမည့် အခြေအနေမျိုးရောက်ရှိအောင် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်စည်များကို နိုင်ငံတကာမှ အခွန်များတိုးမြှင့်ကောက်ခံလာ သောကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သူများကို မြန်မာနုိုင်ငံတွင် လာရောက်အ ခြေစိုက်ရန်ဆွဲဆောင်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ထိုလုပ်ငန်းရှင်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များနှင့်အတူ နည်းပညာများသယ်ဆောင်လာခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း ပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီများ၏ အ လားအလာရှိသောကော်ပိုရိတ်စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများအတွက် တိကျသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလည်း ချမှတ်ရန်လို အပ်ပါသည်။
13. ANNUAL REPORT 2018-2019 | 11 ဦးသိမ်းဝေ (ခ) Serge Pun အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ်သုံးသပ်ခြင်း ထိုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သုံးစွဲသူလူတန်းစား တိုးပွားလာကာ ဝင်ငွေလည်း တိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းသည်။ FMI သည် အဓိကစီးပွားရေးမဏ္ဍိုင်များအပေါ် အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်နေပြီး သုံးစွဲသူပြည်သူ များအပေါ် အလေးထားသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင်လည်း ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စုစုပေါင်းဝင်ငွေ မြန်မာကျပ် (၂၅၄.၅) ဘီလီယံရှိခဲ့သဖြင့် ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၃၆.၅% တိုး တက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီဂျစ် တယ်စနစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှု တိုးချဲ့ရေးအတွက် ရိုးမဘဏ်သည် SMART Account များအပေါ် ဆက်လက်အာရုံစိုက် လျက်ရှိပါသည်။ သုံးစွဲသူပြည်သူများအား ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ရိုးမဘဏ်၏ လုပ်ထုံးစနစ်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအားကောင်းအောင် လုပ် ဆောင်ခြင်းနှင့် ဘဏ်ခွဲများတွင် ရိုးရှင်းပြီးစနစ်ကျမှုရှိသည့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် ပုံရှိခြင်းမှာ အရေးကြီးသည်ကို ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ SGX-ST ၏ Catalist Board စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည့် OUE Lippo Healthcare Limited (OUELH) သည် လစ်ပိုလုပ်ငန်းစုမှ ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ (PHSH) တွင် ပိုင်ဆိုင်သည့် အစုရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူခဲ့ သည်။ OUELH သည် လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ တွင် အာရှဒေသ၏ ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်လာရန် ရည်မှန်းထားပြီး ထိုရည်မှန်း ချက်သည် PHSH ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ထပ်တူကြသည့်အတွက် PHSH အတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။ ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ၏ ဝင်ငွေ သည် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မြန်မာကျပ် (၂၄.၉)ဘီလီယံ ရရှိခဲ့သဖြင့် ယခင်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၂.၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။ အိမ်ရာဖော်ထုတ်တည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ပြီး နောက် ရလဒ်ကောင်းများရရှိရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှု ရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီး လူငယ်များ၏မျှော် လင့်ချက်များ မြင့်တက်လာရာ လူနေမှုပုံစံများလည်း သိသာစွာပြောင်းလဲလာသည် ကိုတွေ့ရသည်။ Yoma Land အနေဖြင့် ပြောင်းလဲမှုများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ နှင့်အညီ စီမံကိန်းအသစ်များကို ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် Yoma Land သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူလတ်တန်းစား များအတွက် ရည်ရွယ်သည့် ခေတ်မီတန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာတစ်ခုဖြစ်သော City Loft စီမံကိန်းကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ City Loft အိမ်ရာသည် ပြည်တွင်းဘဏ်များနှင့် ပူး ပေါင်း၍ (၂၅)နှစ်ကြာ အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်သည့်အပြင် သင့်တင့်သောဈေးနှုန်း တို့ကြောင့် ပြည်သူများ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ အိမ်ပိုင်နိုင်လာမည်။ ထိုအချက်သည် ကျွန်တော်တို့အတွက်သာမက မြန်မာနုိုင်ငံအိမ်ရာဖော်ထုတ် တည်ဆောက်ရေး ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအတွက်လည်း အရေးကြီးသော သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ FMI မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Memories Group Limited (Memories Group) သည် ယခုအခါ မြန်မာနုိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းဟိုတယ် နှင့် ဇိမ်ခံခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ မေ့မရနိုင် သော အတွေ့အကြုံအသစ်များအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ဖြစ်လာစေရန် ဟူသောရည်မှန်းချက်ဖြင့် ဆက်လက်ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ ခရီးသွားဧည့်သည် များအား မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူများကို တွေ့မြင်စေခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နက် ရှိုင်းမှုကို ပိုမိုနားလည်လာကာ နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ် လမ်းမှ ကူညီထောက်ပံ့လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ယဉ်ကျေး မှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး မတူကွဲပြားမှုများဖြင့် လှပသောနုိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့် ခရီးသွားကဏ္ဍကို မှန်ကန်စွာစီမံခန့်ခွဲနုိုင်ပါက တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု တွင် အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် ပြည်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်း မွန်သော မြန်မာနိုင်ငံတည်ဆောက်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျွန်တော် တို့ ဝန်ထမ်းများ၏ စုပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုတို့ မရှိ မဖြစ်လိုအပ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ FMI တွင် သမာဓိရှိမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှု၊ တီထွင်ကြံဆမှုနှင့် ရိုသေလေးစားမှုဟူသော အဓိကအမြုတေတန်ဖိုး (၄)ခုရှိ ပါသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ကျားမတန်းတူညီမျှ ရေးသည် အရေးပါသည်ဟု ကျွန်တော်တို့ရှုမြင်ပါသည်။ ဤကျားမတန်းတူ ညီမျှ ရေးသည် ကျွန်တော်တို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းအပေါ် ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင် သည့်အတွက် အရေးပါသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျားမတန်းတူညီမျှရေးအဖွဲ့ (BCGE) ၏ တည်ထောင်သူ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျားမတန်းတူညီမျှမှုရှိရေးစွမ်းဆောင်မှု (EDGE) ၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ EDGE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ကျားမ ဝန်ထမ်း ညီမျှစွာခန့်အပ်ထားခြင်း၊ ထိရောက်သည့် မူဝါဒ အလေ့အထရှိခြင်းနှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်မှုရှိခြင်းတို့အပေါ် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနှင့် ဘက်လိုက်မှုကင်းမဲ့စွာ သုံးသပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သည့် ဦးတည်ချက်ဖြင့် ရှေ့သို့ချီတက်လျက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းခွင်ကျားမ တန်းတူညီမျှရေးကို မြှင့်တင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတို့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားပြီး ကျားမတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုလည်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် မြင်တွေ့ရတော့မည်ဖြစ် သည်။ အနာဂတ် ယခုနှစ်တွင် ရလဒ်ကောင်းများရရှိခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ စီးပွားရေးလုပ် ငန်းများကို ရေရှည်တွင် အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်စေမည့် နည်းဗျူဟာများကို ဆက်လက်ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်သွားမည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အောင်မြင်ရေးအပေါ် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံအပေါ်တာဝန်ကျေပွန်ရမည် ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို ဦးဆောင်ဖန်တီး ပေးရန်နှင့် ကော်ပိုရိတ်စနစ်ကောင်းများကို ဖော်ထုတ်ကျင့်သုံးသွားရန်မှာ ကျွန် တော်တို့၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်ဟု အမြဲသတိရ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ FMI ကို စတင်တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ ကျွန်တော်တို့အပေါ် ယုံကြည်ကြသူများဖြစ် သည့် ရှယ်ယာရှင်များအားလုံးကို ဘုတ်အဖွဲ့ကိုယ်စား ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင် ကြောင်းပြောကြားလိုပါသည်။ထို့အပြင်FMIကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတာဝန်ယူသိ တတ်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်အောင် ကြိုးစားပုံဖော်ပေးခဲ့သည့် ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်း များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ကတိကဝတ်အတွက်လည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သူတို့၏ ကုမ္ပဏီအပေါ်ယုံကြည်မှုကြောင့် လာမည့်နှစ်များ တွင် အောင်မြင်မှုများ ဆက်လက်ရရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့်
14. 12 | FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD. FY2019 KEY ACHIEVEMENTS & HIGHLIGHTS INITIATIVES INTO EQUALITY WITHIN THE GROUP PHSH is the first EDGE (Economic Dividend for Gender Equality) Certified Hospital globally. FMI has gained EDGE Certification asarecognition of its goal to have the best Gender Equality-oriented workplace. YOMA BANK The theme of the year-long celebration was “25for25”. 25 acts of kindness events were held throughout Myanmar from surprising customers with free groceries to giving free comprehensive eye exams to children. WAVE MONEY Named one of the Top 100 Fintech Companies globally. MEMORIES GROUP Bringingaluxury dive resort to the tranquil Mergui Archipelago in Myanmar.
15. ANNUAL REPORT 2018-2019 | 13 YOMA CENTRAL PROJECT Environmental Compliance Certificate obtained after two years of hard work and perseverance of the project team. PUN HLAING SILOAM HOSPITALS SEIN HOSPITAL Taunggyi, was transformed intoaPHSH-branded hospital. LAUNCHING CITY LOFT The public launch ceremony of the City Loft project was held in the compound of StarCity Sales Gallery on 30 March 2019. OPENING DOORS ACROSS MYANMAR Successfully launched4hotels across the country which are designed to cater for visitors with different lifestyles.
16. U THEIM WAI @ SERGE PUN EXECUTIVE CHAIRMAN U TUN TUN EXECUTIVE DIRECTOR CHIEF OPERATING OFFICER DAW ZARCHI TIN EXECUTIVE DIRECTOR HEAD OF FINANCE AND INVESTMENT BOARD OF DIRECTORS U MYAT THIN AUNG NON-EXECUTIVE VICE-CHAIRMAN 14 | FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD.
17. U THAN AUNG NON-EXECUTIVE DIRECTOR U LINN MYAING NON-EXECUTIVE DIRECTOR & SPECIAL COUNSEL TO THE EXECUTIVE CHAIRMAN PROFESSOR DR. AUNG TUN THET NON-EXECUTIVE DIRECTOR U KYI AYE NON-EXECUTIVE DIRECTOR PROFESSOR DR. YI YI MYINT NON-EXECUTIVE DIRECTOR ANNUAL REPORT 2018-2019 | 15
18. 16 | FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD. LEADING TALENT TO PERFECT HARMONY
19. ANNUAL REPORT 2018-2019 | 17 U THEIM WAI @ SERGE PUN EXECUTIVE CHAIRMAN Present Directorships in listed companies: First Myanmar Investment Public Co., Ltd. Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited Yoma Strategic Holdings Ltd. (Singapore) Memories Group Limited (Singapore) Appointed on: 12 September 2004 | Last Re-elected on: 31 July 2016 U Theim Wai @ Serge Pun (“U Theim Wai”) isaMyanmar national and the Executive Chairman of FMI. In 1983, he founded Serge Pun & Associates Limited in Hong Kong SAR and eventually returned to Myanmar, the country of his birth, to establish SPA in 1991. In 1992, U Theim Wai established FMI as one of the earliest public companies (unlisted) in Myanmar. In 2006, he led Yoma Strategic toasuccessful listing on the Mainboard of the SGX-ST. In 2016, he also led FMI to be the first company to list on the YSX. He was also instrumental in listing Memories Group on the Catalist Board of the SGX-ST in 2018. U Theim Wai isamember of the World Economic Forum’s ASEAN Regional Strategy Group and ASEAN Regional Business Council. He isastanding member of the Chinese People’s Political Consultative Conference of Dalian andamember of the Asia Business Council. He is also the Chair of the International Advisory Board of Singapore Management University for Myanmar as well as the Vice-Chairman and Chief Executive Officer of New Yangon Development Company Limited. U Theim Wai served as an Honorary Business Representative of the International Enterprise Singapore for Myanmar from 2004 to 2006. He isafrequent speaker in international forums on Myanmar and ASEAN Region. ဦးသိမ်းဝေ သည် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး FMI ၏ အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ဦးသိမ်းဝေသည် Serge Pun & Associates လီမိ တက်အား ဟောင်ကောင်မြို့ (အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ) တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အမိမြေ မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာကာ Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited (SPA) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ခုနှစ်တွင်SPA၏အဓိကမှတ်တိုင်ဖြစ်သောFMIကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၅)ရက်နေ့တွင် အသစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်း၌ ပထမဦးဆုံး စာရင်းတင်သွင်းနိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်တွင် ဦးသိမ်းဝေ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့်် Yoma Strategic လီမိတက်ကို စင်္ကာပူစတော့အိတ်ချိန်း Main Board တွင် အောင်မြင်စွာ စာရင်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၅)ရက်နေ့တွင် Memories Group လီမိတက်ကို စင်္ကာပူစတော့အိတ်ချိန်း Catalist Board တွင် အောင်မြင်စွာစာရင်း တင်သွင်းနိုင် ခဲ့ပါသည်။ ဦးသိမ်းဝေ သည် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်၊ အာဆီယံဒေသတွင်း မဟာဗျူဟာအဖွဲ့နှင့် အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေးကောင်စီတို့၏ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။သူသည်တရုတ်ပြည်၊တာလျန်မြို့ရှိပြည်သူ့အကြံပေးညီလာခံ၏ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နှင့် အာရှစီးပွားရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူသည် Singapore Management University ရှိ နိုင်ငံတကာ အကြံပေးအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် (NYDC) ၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် International Enterprise Singapore ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်မှ ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် မြန်မာနို်င်ငံနှင့် အာဆီယံဒေသတစ်ဝန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖိုရမ်တို့၌် မကြာခဏဟောပြောသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ U TUN TUN EXECUTIVE DIRECTOR & CHIEF OPERATING OFFICER Present Directorships in listed companies: First Myanmar Investment Public Co., Ltd. Memories Group Limited (Singapore) Appointed on: 17 November 2009 | Last Re-elected on: 30 July 2017 U Tun Tun has been with the SPA and FMI group of companies since 1998. He has been an Executive Director of FMI since 2009 and currently also serves as its Chief Operating Officer. He is alsoaNon-Executive Director of Memories Group. Over the years, he has held various positions at both operational and corporate levels and has overseen many of the Group’s subsidiaries and joint ventures. U Tun Tun is an Associate Member of the Institute of Chartered Secretaries & Administrators (UK). ဦးထွန်းထွန်းသည် SPA နှင့် FMI ကုမ္ပဏီအုပ်စုသို့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် စတင် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်မှစ၍ FMI ၏ အလုပ်အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် FMI ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအမှု ဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သူသည် Memories Group ၏ အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဦးထွန်းထွန်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ကုမ္ပဏီစီမံ ခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ရာထူးအမျိုးမျိုးတွင် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ လုပ် ငန်းဆောင်တာများနှင့် ပူးပေါင်းဖက်စပ်လုပ်ငန်းများတွင် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲလျက် ရှိပါသည်။ သူသည် Institute of Chartered Secretaries & Administrators (UK) ၏ အသင်းဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ DAW ZARCHI TIN EXECUTIVE DIRECTOR & HEAD OF FINANCE AND INVESTMENT Present Directorships in listed companies: First Myanmar Investment Public Co., Ltd. Appointed on: 1 July 2018 | Last Re-elected on: 29 July 2018 Daw Zarchi Tin is an Executive Director of FMI and currently also serves as its Head of Finance and Investment. Daw Zarchi Tin joined the Group in 2013 asadirector of Yoma Bank and was the Director of Strategic Development at FMI from 2017 to 2018. Prior to joining the Group, Daw Zarchi Tin had over 15 years of professional experience in international corporations across various industries including business development, corporate strategy and investment banking. Besides beingadirector of Yoma Bank, she is alsoadirector of FMIDecaux and the Chairperson of the Business Coalition for Gender Equality Association for 2018-2019.
20. 18 | FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD. U LINN MYAING NON-EXECUTIVE DIRECTOR & SPECIAL COUNSEL TO THE EXECUTIVE CHAIRMAN Present Directorships in listed companies: First Myanmar Investment Public Co., Ltd. Appointed on:2July 2012 | Last Re-elected on: 29 July 2018 U Linn Myaing isaNon-Executive Director of FMI and Special Counsel to the Executive Chairman. U Linn Myaing joined FMI in 2010 and currently leads the Group Government Relations Department. He was appointed as SPA’s Advisor to the Board in 2006. U Linn Myaing isaretired Director General from the Ministry of Foreign Affairs. He served as Myanmar’s Ambassador to several Western countries including France and the United States. He was also an Ambassador and the Head of the Myanmar Mission to the European Union and Permanent Delegate to UNESCO. ဦးလင်းမြိုင် သည် FMI ၏ အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာဖြစ်ပြီး အမှု ဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ အထူးအတိုင်ပင်ခံလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဦးလင်းမြိုင် သည် ၂၀၁၀ မှစ၍ FMI သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် အစိုးရဆက်ဆံရေးဌာန၏ အကြီးအကဲ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ဦးလင်းမြိုင်သည် ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်တွင် SPA ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သို့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အငြိမ်းစားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ယင်း မတိုင်မီ သူသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင် အနောက် နိုင်ငံအချို့တွင် မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် သူသည် ဥရောပသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ UNESCO ဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန် ထမ်း ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ U THAN AUNG NON-EXECUTIVE DIRECTOR Present Directorships in listed companies: First Myanmar Investment Public Co., Ltd. Appointed on: 31 July 1992 | Last Re-elected on: 30 July 2017 U Than Aung isaNon-Executive Director of FMI and isamember of the Audit & Risk Management Committee and the Nominating Committee. U Than Aung joined FMI in 1992. He is currently the Managing Director of Yar Pye Company Limited and other family-owned companies. He is also the Vice Chairman of the Pathein Association. ဦးသန်းအောင် သည် FMI ၏ အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာအဖြစ် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး Audit & Risk Management Committee နှင့် Nominating Committee တို့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ တွင် သူသည် ရာပြည့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် အခြားမိသားစုပိုင် ကုမ္ပဏီများ၏ အုပ် ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဖြစ်သည့်အပြင် ပုသိမ်မြို့နယ်အသင်း၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သည်။ Daw Zarchi Tin holdsaPostgraduate Diploma in Financial Strategy from the University of Oxford in England, an MBA in Finance from the University of Ottawa in Canada, andaB.A. in Economics from Vesalius College in Belgium. She also holdsaBoard of Directors Certification by the Institute of Directors in Thailand and Myanmar. ဒေါ်ဇာခြည်တင် သည် FMI ၏ အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိ တွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ယူထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ သူမသည် ကုမ္ပဏီအုပ်စုသို့ ရိုးမဘဏ်၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအ နေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မှ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိကို FMI ၏ Strategic Development ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအုပ်စုသို့ မရောက်ရှိမီ သူမသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ မဟာဗျူဟာချမှတ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ် ငန်းများကို နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းများ၌ (၁၅)နှစ်ကျော် လုပ်ကိုင်ခဲ့ သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် ရိုးမဘဏ်၏ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် FMIDecaux ၏ ဒါရိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါသည်။ Business Coalition for Gender Equality Association ၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်း ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ တွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သူမသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Oxford တက္ကသိုလ်မှ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ ဘာသာရပ်ဖြင့်် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာဘွဲ့၊ ကနေဒါနိုင်ငံ Ottawa တက္ကသိုလ်မှ ဘဏ္ဍာရေးဘာသာရပ်အထူးပြု စီးပွားရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးမဟာဘွဲ့ (MBA) နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ Vesalius College မှ ဘောဂဗေဒဘာသာရပ် အထူးပြုဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (B.A) တို့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ Institute of Directors မှ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဘွဲ့လက်မှတ်ကို ရရှိထားသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ U MYAT THIN AUNG NON-EXECUTIVE VICE-CHAIRMAN Present Directorships in listed companies: First Myanmar Investment Public Co., Ltd. Appointed on: 31 July 1992 | Last Re-elected on: 30 July 2017 U Myat Thin Aung is the Non-Executive Vice-Chairman of FMI and is the Chairman of the Remuneration Committee. U Myat Thin Aung joined FMI in 1992. He is the Chairman of AA group of companies and serves as the Patron of Yamethin and Daik-U Associations. U Myat Thin Aung isamember of the Central Executive Committee of the Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce & Industry (“UMFCCI”), andaPatron of Hlaing Thayar Industrial City Management Committee. He is also the Vice Chairman of the Myanmar-China Friendship Association (Central). ဦးမြတ်သင်းအောင် သည် FMI ၏ အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် Remuneration Committee ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် FMI သို့ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဦးမြတ်သင်းအောင်သည် AA ကုမ္ပဏီ များအုပ်စု၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး ရမည်းသင်းမြို့နယ်အသင်းနှင့် ဒိုက်ဦးမြို့နယ်အသင်း တို့တွင် နာယကအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီတစ်ဦး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ နာယက အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေးအသင်း (ဗဟို) ဒုဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
21. ANNUAL REPORT 2018-2019 | 19 PROFESSOR DR. YI YI MYINT NON-EXECUTIVE DIRECTOR Present Directorships in listed companies: First Myanmar Investment Public Co., Ltd. Appointed on: 17 November 2009 | Last Re-elected on: 29 July 2018 Professor Dr. Yi Yi Myint has beenaNon-Executive Director of FMI since 2009 and isamember of the Audit & Risk Management Committee and the Remuneration Committee. She isaretired professor of economics withalong tenure at the Yangon Institute of Economics. Professor Dr. Yi Yi Myint was awarded the Good Public Service Medal in 1990 and wasadelegate to the National Convention. In 2015, she was awardedaD.Litt (Honoris Causa) from Yangon Institute of Economics. She is currently an executive member of the Myanmar Academy of Arts and Sciences. အငြိမ်းစားပါမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်ရီရီမြင့် သည် FMI ၏ အလုပ်အမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာအဖြစ် ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်မှ စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး Audit & Risk Management Committee နှင့် Remuneration Committee တို့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် အငြိမ်းစား စီးပွားရေးပါမောက္ခဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူမသည် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်း တံဆိပ်ကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး အမျိုးသားညီလာခံ၏ ကိုယ်စား လှယ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ဒေါ်ရီရီမြင့်အား ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ကို ချီးမြှင့် ခဲ့ပါသည်။ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဒေါ်ရီရီမြင့် သည် လက်ရှိအချိန်၌ မြန်မာနိုင်ငံ ၀ိဇ္ဇာနှင့်သိပံ္ပပညာရှင်အဖွဲ့၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပါသည်။ PROFESSOR DR. AUNG TUN THET NON-EXECUTIVE DIRECTOR Present Directorships in listed companies: First Myanmar Investment Public Co., Ltd. Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited Appointed on:3December 2013 | Last Re-elected on: 29 July 2018 Professor Dr. Aung Tun Thet has beenaNon-Executive Director of FMI since 2013 and is the Chairman of the Nominating Committee. He is an Advisor to the UMFCCI, as well asamember of the Peace Commission and the Myanmar Investment Commission. Professor Dr. Aung Tun Thet isaProfessor Emeritus at Yangon University of Economics,avisiting professor at Payap University, Chiangmai, Thailand and Honorary Professor at University of British Columbia, Vancouver, Canada. He graduated with B.Com. (YGN), Post- Graduate Diploma in Management Studies (Brighton, UK), M.Sc. (Warwick, UK), Ph.D. (Manchester, UK) and isaPost-Doctoral Fellow (Marburg, Germany). ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် သည် FMI ၏ အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ် သော ဒါရိုက်တာအဖြစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး Nominating Committee ၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် UMFCCI အသင်း၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင် တို့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူသည် ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်၏ အငြိမ်းစားဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ Payap တက္ကသိုလ်၏ ဧည့်ပါမောက္ခနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံ Vancouver မြို့ British Columbia တက္ကသိုလ်၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ သူသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့၊ UK နိုင်ငံ Brighton မြို့မှ စီမံခန့်ခွဲရေး သိပံ္ပ ဘာသာရပ်တွင် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ၊ Warwick မြို့မှ မဟာသိပံ္ပဘွဲ့၊ UK နိုင်ငံ Manchester မှ ဒေါက်တာဘွဲ့တို့ကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ Marburg တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့လွန်ဒေါက်တာ Fellowship တို့ကို ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ U KYI AYE NON-EXECUTIVE DIRECTOR Present Directorships in listed companies: First Myanmar Investment Public Co., Ltd. Appointed on:5November 2015 | Last Re-elected on: 31 July 2016 U Kyi Aye has beenaNon-Executive Director of FMI since 2015. He is the Chairman of the Audit & Risk Management Committee andamember of the Remuneration Committee. He joined Yoma Bank in 2000 and is nowadirector of Yoma Bank. He was alsoadirector of Yoma Strategic from 2006 to 2015. He began his banking career in 1960 and joined the Central Bank of Myanmar (“CBM”) in 1965. U Kyi Aye isaretired Governor of the CBM, having held the position between 1992 to 1998. He holds B.Com and B.L degrees from Yangon University andaDiploma in World Banking and Finance from The Economic Institute in Boulder, Colorado, USA. He isaCertified Public Accountant. ဦးကြည်အေး သည် FMI ၏ အလုပ်အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာအဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး Audit & Risk Management Committee ၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် Remuneration Committee ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရိုးမဘဏ်တွင် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ဒါရိုက်တာတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ သူသည် Yoma Strategic တွင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ၂၀ဝ၆ မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့၍ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ဗဟိုဘဏ်၌ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ၁၉၉၂ မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့နှင့် ဥပဒေဘွဲ့များအပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံ The Economic Institute in Boulder, Colorado မှ ကမ္ဘာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ဘဏ္ဍာ ရေးဆိုင်ရာဒီပလိုမာ ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ သူသည် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်း ကိုင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
22. 20 | FIRST MYANMAR INVESTMENT PUBLIC CO., LTD. FMI MANAGEMENT U THEIM WAI @ SERGE PUN * EXECUTIVE CHAIRMAN U TUN TUN * EXECUTIVE DIRECTOR & CHIEF OPERATING OFFICER DAW ZARCHI TIN * EXECUTIVE DIRECTOR & HEAD OF FINANCE AND INVESTMENT DR. YE MOE MYINT SENIOR DIRECTOR & DEPUTY HEAD | GROUP GOVERNMENT RELATIONS DEPARTMENT Dr. Ye Moe Myint has beenaSenior Director and Deputy Head of the Group Government Relations Department since February 2018. He was the Associate Medical Director in 2008 and Hospital Administrator in 2009. He has also worked as the Network and Development Executive Director for PHSH. Dr. Ye Moe Myint was elected as the President of the Myanmar Private Hospitals’ Association from 2012 to 2018. He received his medical degree from the Institute of Medicine (1), Yangon in 1989. ဒေါက်တာရဲမိုးမြင့် သည် ကုမ္ပဏီအုပ်စု အစိုးရဆက်ဆံရေးဌာန၏ အကြီးတန်း ဒါရိုက်တာနှင့် ဒုတိယအကြီးအကဲအဖြစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ သူသည် ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်တွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တွဲဘက်ဒါရိုက်တာအဖြစ်မှ ၂၀ဝ၉ ခုနှစ်တွင် ဆေးရုံအုပ်ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခြင်း ခံရပါသည်။ ထို့ပြင် ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ၏ Network နှင့် Development Executive Director အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာရဲမိုးမြင့်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း ခံရပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) မှ M.B.B.S ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ U KYI AYE SENIOR DIRECTOR & DEPUTY HEAD | GROUP GOVERNMENT RELATIONS DEPARTMENT U Kyi Aye currently serves as the Senior Director and Deputy Head of the Group Government Relations Department. U Kyi Aye wasaformer government official and has served in the Armed Forces of Myanmar, Ministry of Industry No. (2) and Ministry of Rail Transportation for over 40 years. He joined SPA in 2013, the same year he retired from Myanma Railways as the General Manager. He was alsoaformer member of the Board of FMI from 1997 to 2006, where he served asarepresentative of the Central Railways Welfare Society. ဦးကြည်အေး သည် လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီအုပ်စု အစိုးရဆက်ဆံရေးဌာန၏ အကြီး တန်းဒါရိုက်တာနှင့် ဒုတိယအကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဦးကြည်အေး သည် ယခင်အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တပ်မတော်၊ အမှတ် (၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့တွင် နှစ်ပေါင်း (၄၀)ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အထွေထွေ မန်နေဂျာရာထူးဖြင့် မြန်မာ့မီးရထားမှ အငြိမ်းစားယူခဲ့ပြီး ထိုနှစ်တွင်ပင် SPA ၌ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ဗဟိုရထားပို့ဆောင်ရေးသက်သာ ချောင်ချိရေးအသင်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် FMI ၏ ဘုတ်အဖွဲ့တွင် ၁၉၉၇ မှ ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ U MAW THEIN SENIOR DIRECTOR | GROUP GOVERNMENT RELATIONS DEPARTMENT U Maw Thein joined SPA in 2012 as the Chief Operating Officer of F M I Flotilla Company Limited. He has beenaSenior Director of the Group Government Relations Department since 2013. He retired as Commodore (Navy) in 2008. While in the Navy, U Maw Thein served on naval vessels and on-shore establishments including the offices of the Commander-in- Chief (Navy) and Ministry of Defense (Quartermaster – General) in various capacities. ဦးမော်သိမ်း သည် FMI Flotilla ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအမှုဆောင် အရာရှိချုပ်အဖြစ် SPA သို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ဝင်ရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီအုပ်စု အစိုးရဆက်ဆံရေးဌာန၏ အကြီးတန်းဒါရိုက်တာအဖြစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရပါသည်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော် (ရေ) မှ ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ဖြင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည့် သူသည် တပ်မတော် (ရေ) ၌ စစ်ရေယာဉ်မှူး၊ တပ်စခန်းမှူးနှင့် ဌာနချုပ်မှူးတာဝန်များကို ကာကွယ်ရေးဦး စီးချုပ်ရုံး (ရေ) နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန စစ်ထောက်ချုပ်ရုံး၊ ရေတပ်စခန်း၊ ဌာနချုပ်များတွင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ DAW CHAW SU LINN FINANCIAL CONTROLLER | CORPORATE FUNCTIONS Daw Chaw Su Linn is currently the Financial Controller of the Group. She joined FMI as Finance Manager in January 2017. She was also the former Deputy Head of Finance at Yoma Bank. She has over 10 years of experience in the finance and accounting field with significant exposure to the banking and manufacturing industries in Singapore, Australia and Myanmar. She holdsaBachelor of Finance from Australian National University and isaCertified Public Accountant (CPA). ဒေါ်ချောစုလင်း သည် FMI ၏ ဘဏ္ဍာရေးမန်နေဂျာအဖြစ်၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လတွင် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဘဏ္ဍာရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ ယခင်က ရိုးမဘဏ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယ အကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သူမသည် စင်္ကာပူ၊ ဩစတြေး လျနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိ ဘဏ္ဍာ ရေးနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍများ၌ (၁၀) နှစ်ကျော်ကြာ အတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် Australian National University မှ ဘဏ္ဍာရေးဘာ သာရပ်ဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိထားသည့်အပြင် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (CPA) တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ MANAGEMENT TEAM * Member of Board of Directors.